Wiil Soomaali ah oo Magdhow loo siiyay saddex milyan oo EURO | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Wiil Soomaali ah oo Magdhow loo siiyay saddex milyan oo EURO
Wiil Soomaali ah oo Magdhow loo siiyay saddex milyan oo EURO
Mar 31, 2018ARRIMAHA BULSHADA, MAQAALO, WACYIGELIN, WARAR, WARAR KALE
Nin Soomaali ah oo si khalad ah loogu xukumay dilkii wariye RAI Ilaria Alpi iyo sawir qaade Milan Hrovatin ayaa helay saddex milyan oo yuuro oo magdhow ah ka dib Sanado badan oo uu xabsi ku jiray.
Xaashi Cumar Xassan ayaa helay lacag dhan 3.181 Milyan oo Euro oo ay u xukuntay maxkamadda racfaanka Perugia.
Maxkamadda ayaa sheegtay in lacagtaan ay tahay Magdhow, maadaama uu Sanado badan uu xirnaa, isagoo ah eedeysane.
Bishii Oktoobar 2016-kii ayaa Maxkamad Perugia ay ka noqotay xukunkii Haashi lagu riday 1994-kii.
Dacwad oogaha Dario Razzi ayaa u sheegay maxkamada inaysan “geli Karin” dembiga uu ka shaqeynayay in ka badan 16 sano oo xabsi ah, islamarkaana uusan galin dambiga lagu eedeeyey ee ahaa inuu ka qayb qaatay dil magaalada Muqdisho sanadkii 1994- ka dhacay.
Gabadha wariyaha ayaa Soomaaliya u tagtay si ay ugu sameeyaan baaritaano eedeymaha sheegaya, in shirkaddo laga leeyahay dalka Talyaaniga ay qayb ka ahaayeen haraaga sunta oo lagu shubay xeebaha Soomaaliya iyo hub laga iibiyey dad loogu yeeray hogaamiye kooxeedyadii Soomaaliya hortaantii sagaashameeyadii.
Ilaria Alpi ayaa ka tagtay magaalada Boosaaso ka dibna waxay timid magaalada Muqdisho halkaasi oo lagu dilay March 20, 1994.
Xaashi Cumar Xasan, ayaa si shirqool ah loo geeyay dalkaasi, bishii January ee sanadkii 1998-kii.
Previous PostXildhibaan Axmed Fiqi “Madaxweynuhu wuxuu dareemay muhiimadda baaqyadii kala duwanaa iyo in khatar dalku ku socdo” Next PostGuddoomiye Jawaari oo ka hadlay Sababtii loo baajiyay Kulankii Maanta